Arday Ka qalinjebisay Dugsiga sare ee Gambool oo Garoowe Xaflad ku qabsaday+Sawiro – SBC
Arday Ka qalinjebisay Dugsiga sare ee Gambool oo Garoowe Xaflad ku qabsaday+Sawiro
Arday kor u dhaafeysa 388 ayaa maaanta loogu qabtay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay gudaha Hoolka BDRC ee magaalada Garoowe kuwas oo ka baxay Dugsiga sare ee Iskoolka Gambool ee magaaladaasi Garoowe.
Masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xubnaha ku shaqada leh waxbarashada ee golaha wasiirada Dowlada Puntland, Xubno ka tirsanaa Baarlamanka Puntland siiba Gudoomiye ku xigeenka Barlamanka iyo Barafasooro khiimo badan ku leh waxbarashada Puntland ayaa ka qeyb galay Xafladan .
Waxaa iyana qeyb ka ahaa xaflada Waalidiin, Macalimiin iyo Ardaydii qalin jebineysay oo wiilal iyo gabdho isugu jiray.
Intii ay socotay Xaflada waxaa hadalo kala duwan oo qiimabadan ka soo jeediyay goobta Masuuliyiintii kala duwanaa oo uu qeyb ka ahaa wasiirka wasaarada Waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Juxa.
Waxa uu wasiirku tibaaxay arimo badan oo ku saabsanaa waxbarashada isagoo ardaydii halkaasi ku sugnaa ee Qalinjebinaysay u soo jeediyay in ay waxbarashadooda sii wataan ilaa heer jaamacadeed, ka wasaarad waxbarasho ahaanna ka caawin doonto howlo farabadan oo waxbarashada ku saabsan hadii ay noqon laheyn raadinta deeqaha waxbarashada .
Dhinaca kale Ardaydii Qalin jebineysay ayaa halkaasi ku soo bandhigay Qudbado xiisabadan laheyd oo afaf kala duwan ku baxeysay, waxaa kale qeybtood ardaydu si cilmiyeysan u soo bandhigeen Barnaamij wacyi gelin ah oo qaab riwaayadeed u soo agaasimeen.